As of Fri, 03 Apr, 2020 00:20
यातायातमा फेरि घोटाला
गल्ती गर्नेलाई रंगेहात समाउँदा समेत कसुदार ठहर गरी सिधै थुन्न नपाउने निकाय र गल्ती गर्नेले पनि सच्चिन नजान्ने निकाय भनेकै यातायातको क्षेत्र रहेछ । दुवै पक्षको तालमेल किन मिलेन त भनेर अध्ययन गर्ने निकाय पनि विज्ञ विहिन भएको पुष्ट्याइँ भएको छ । अचम्म मान्नुपर्ने विषय भनेको नै यातायात क्षेत्रमा पाइएको छ । यातायात क्षेत्रमा जति छिटो–छिटो नियम कानुन परिवर्तन हुन्छ सायद अन्य निकायमा यस्तो नहोला । यस्तो परिवर्तनकारी निकाय पनि हाम्रो सरकारका मातहतका जिम्मेवार संकाय होलान त भन्ने अनुमानधरी कसैले लगाउन सक्दैनन् । नियम र कानुनको निर्देशिकाको मसी पनि ओभाउन नपाउँदै अर्को लेख अर्थात् नियम आइसकेको हुन्छ । नियम कानुनको अभ्यास गर्नु छ भने यसै निकायलाई मात्र रोज्न सकिने जस्तो भान व्यवहारले देखाएको छ ।
कोरोना भाइरसको त्रास, मोरिङ्गाको प्रभाव
कोरोना भाइरसको त्रास आज विश्वभरि महामरीका रूपमा फैलिएको छ । गाउँ होस् वा सहर, धनी होस् वा गरिब, टाढा होस् या नजिक सबै त्राहि–त्राहि भएका छन् । यसलाई निर्मूल गर्न सक्ने हामीसँग कुनै सामथ्र्य छैन, चीन र अमेरिकाको शक्तिले सकेन, जापान र कोरियाको प्रविधिले सकेन भने हामी त केवल सजग हुनुबाहेक अन्य विकल्प छैन । मानौं, अब यो दुनियाँमा कोरोना भाइरसभन्दा ठूलो शत्रु केही छैन । चाइनाबाट सुरु भएको यो भाइरस कोरिया, जापान, भारत, हुँदै विश्वभर फैलिएको छ भने नेपाल अछुतो रहनै सक्दैन ।
कोरोना कहर : नेपाल भ्रमण वर्ष भयो मात्र रहर !
यसकै कारण दिन–प्रतिदिन मानिसहरूको मृत्यु थपिंदै गयो । करिब तीन महिनाको अवधिमा यसकै कारण विश्वमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ३ हजार ४ सय ९१ (यो आलेख तयार पार्दासम्म) नाघ्यो । प्रभावितको संख्या १ लाख २ हजार ४७१ पुगिसकेको छ । थपिने क्रम जारी छ । प्रकोप सुरु भएको चीनमा संक्रमण दरमा कमी आए पनि विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको छ ।
नेपालका पार्टीहरूको नेतृत्व शैली— २
प्रत्येक पार्टीभित्र हिजोको जस्तो सैद्धान्तिक असहमति देखिँदैन । सैद्धान्तिक असहमति र सहमतिलाई विचार आदान–प्रदान, छलफल र बहसको विषय बनाउने प्रचलनको मृत्यु नै भइसकेको छ । मुख्य शक्ति केन्द्रित पार्टीभित्रका पद र जनप्रतिनिधि बन्ने पद मुख्य व्यवस्थापन गर्ने समस्या जन्मिएको छ । पार्टीहरूको नेतृत्वसँग आधारभूत सैद्धान्तिक धरातल नरहेपछि भुटेका मकै र एक अंखोरा पानी पिएर पछि लागिदिने मान्छेको हाहाकार हुने अवश्यम्भावी हुने नै भयो । त्यसैले शक्तिको हारालुछ जन्मायो ।
नेपालका पार्टीहरूको नेतृत्व शैली— १
हामीले प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाभित्र रहेर विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कनका बारे कुरा गरेको ३० वर्ष पुग्न लागे । आज आएर हामी पन्ध्रौँ योजनातिर दगुरिरहेका छौं । हाम्रा नारा दिगो विकासका लक्ष्यसँग जोडिएका ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ छन् । आश्चर्यलाग्दो विषय के छ भने यो समृद्धि हाँक्ने, सुखका सूचकाङ्कहरू पहिल्याउने, राष्ट्रिय रणनीतिहरू बनाउने र रूपान्तरणका प्रमुख संवाहक अर्थात् नेपालका पार्टीहरू, नेतृत्व वर्ग र विभिन्न तप्काका पार्टी सदस्यहरूसमेत आफ्नै पार्टीभित्र रहेको कोरोना भाइरसबाट आफैं पीडित छन् । हाल यो उपचारमा अलमलिनुबाहेक देश एकै इन्च सकारात्मक पाटोमा जाने अवस्था देखिँदैन । यही विषयलाई सा¥है थोरै सैद्धान्तिक र संस्थागत रूपले चिरफार गर्ने गरी यो लेख लेखिएको छ, अन्य कुरा युवा पुस्ताले नै मूल्यांकन गरोस् ।
उपचारात्मक शिक्षण पद्धतिको महत्व
सामान्यतया विद्यालयमा भर्ना भएका अधिकांश विद्यार्थी प्रचलित शिक्षण सिकाइको शैलीमा सहज रूपमा सिक्न सक्ने हुन्छन् । उनीहरूमध्ये धेरै विद्यार्थीमा सिकाइ समस्याहरू रहेको हुँदैन । यस्ता विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले थाहा नपाएका र नसिकेका सीपहरू शिक्षण गर्नुपर्दा पनि नियमित शिक्षण सिकाइकै प्रक्रियाबाट शिक्षण गर्न सकिन्छ । तर, कतिपय विद्यार्थी कुनै एक वा धेरै विषयमा नियमित शैलीबाट गरिएको शिक्षण अभ्यासबाट सिक्न नसक्ने सिकाइ समस्या भएका पनि हुन्छन् ।
सावधानीपूर्वक मनाऔँ होली
कोरोना भाइरसका कारण यस वर्ष फागु पर्व धूमधामसँग मनाउन नमिल्ने भएको हो । कोरोनाको संक्रमण हुने भएका कारण भीडभाडमा नजान र विशेष सावधानी अपनाउन सरकारले अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीले विभिन्न प्रकारको जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर, पर्चा बाँडेर आमनागरिकलाई सचेत बनाउने काम समेत गरिरहेको नै छ ।
कोरोनाको निहुँमा कालोबजारी
चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोविद–१९) को संक्रमणले अहिले विश्वभरि त्रास फैलिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले केही मुलुकलाई उच्च जोखिमको सूचीमा राखेपछि ती मुलुकमा झन् बढी त्रास फैलिएको छ । नेपाल पनि उक्त सूचीमा परेको र चीनबाट नजिकको छिमेकी मुलुकसमेत भएकाले यहाँ पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने त्रासले मानिसहरू निकै त्रसित भइरहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अहिलेसम्म (मार्च ५) ९५ हजार २ सय ६५ जना प्रभावित भएका छन् भने ३ हजार २८१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । चीनमा मात्रै ८० हजारभन्दा बढी उक्त कोराना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् भने ३ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ ।
क्यालिफोर्नियामा आपत्काल घोषणा : संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा प्राणघातक कोरोना जीवाणु (भाइरस) का कारण एक व्यक्तिको मृत्यु भएपछि आपत्काल घोषणा गरिएको छ । अमेरिकामा यो समेत १० जनाको कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु भइसकेको छ । अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारीहरूले क्यालिफोर्नियाको स्याक्रामान्टो अस्पतालमा मृत्यु भएका ती व्यक्ति ७१ वर्षका पुरुष रहेको जानकारी दिएका छन् । ती व्यक्ति हालै क्रुज जहाजको यात्राबाट फर्किएका हुन् ।
सडक सम्पत्ति, सडक दुर्घटना र यसको प्रयोग गर्ने तरिका— ३
प्राविधिक पक्ष : ⇒सवारी साधनको जाँच तथा गति नाप्ने (स्पिड कन्ट्रोलर) उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ⇒ सवारी साधनहरूमा पहेंलो उज्यालो रंगको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । ⇒ पहाडी क्षेत्रका साँघुरा तथा कच्ची सडकमा तीनवटा साफ्ट भएका लामा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्छ । ⇒ फोर ह्विल अनिवार्य गरिनुपर्छ । ⇒ रातका लागि विशेष ट्राफिक संकेत बोर्डहरू राखिनुपर्छ । ⇒ सवारी साधनको अवस्थाको जाँच भेइकल फिटनेस केन्द्रहरू स्थापना गरिनुपर्छ ।
जीउ भए त घिऊ पिउँला, जीउ नै नभए केका लागि धन ? केका लागि सम्पत्ति र आफन्त ? हाम्रा पुर्खाको उखान हो यो । साँच्चै मानव पुँजी भनेको असल भनौँ निरोगी स्वास्थ्य नै होे । सन् २०२० को आगमनसँगै कोरोनाको सन्त्रासले ठूलै रेक्टरस्केलको महाभूकम्पले भैmँ विश्वलाई हल्लाइदियो । वैज्ञानिकहरू नै अचम्मित भइदिए । जापानले विद्यालय नै बन्द गरिदियो, नेपालले कोरिया जाने कामदारलाई रोकिदियो । क्वारेन्टाइनका चर्चा त धेरै भइसकेका छन् । साँच्चै चीनमा बिरामीको उपचार गर्ने अस्पतालका निर्देशकले नै इहलीला समाप्त गरे । साँच्चै सांसारिक जीवन त क्षणभंगुर नै रहेछ नि त ।
सहज बन्दै मानिसको दैनिकी
आजको युग भनेको २१ औं शताब्दीको युग हो । जहाँ हरेक व्यावसायिक क्षेत्रमामा हरेक दिनजसोे विभिन्न कम्पनीले आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन गरेकै देखिन्छन् । प्रविधिमा पनि तीव्र रूपमा मुलुकमा दिनहुँ त्यत्तिकै छलाङ मारिरहेकै अवस्था छ । यसले मानिसको दैनिकी पनि त्यत्तिकै सहज बनिरहेकै छ ।
सडक सम्पत्ति, सडक दुर्घटना र यसको प्रयोग गर्ने तरिका— २
यातायात आयातमा असन्तुलन : नेपालमा यातायातका साधनहरूको आयात अनियन्त्रित र असन्तुलित हुनु सडक दुर्घटनाको कारण हो । धेरै सवारी साधन दर्ता भएको छ । हाल देशमा करिब २० लाखभन्दा धेरै सवारी साधन रहेको छ । नेपाल भित्रिएका सवारीमध्ये बस सर्वसाधारणको सेवामा बढी उपयोगी छ, जसले धेरै सर्वसाधारणलाई सेवा दिन सक्ने साधन हो । तर, बसको संख्या अरू सवारी साधनको तुलनामा कम नै रहेको छ । तर निजी प्रयोजनका साधनमा मोटरसाइकल अति धेरै रहेको छ त्यस्तै कार, जिप र भ्यान पनि तीव्र रूपमा बढ्न पुगेको छ । जनताका सेवाका लागि यातायातको साधनको आयातमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको काम वैज्ञानिक र व्यावहारिक देखिएन । सर्वसाधारणको सेवा दिने ठुला सवारी साधनहरू थोरै आयातले यात्रुहरूले कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था भयो ।
स्थिर सरकारले निम्त्याएको आर्थिक अन्योल
लामो समयपछि देशले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि देशमा यस्तो राजनीतिक माहोल यसअघि थिएन । करिब नौमहिने औसत अस्थिर सरकारको सट्टा जस्तोसुकै कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्ने हैसियतको बलियो सरकार देशले अहिले पाएको छ भने अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको लोडसेडिङबाट देश मुक्त छ ।
के अमेरिका तालिवानसँग झुकेकै हो ?
अमेरिका, अफगान तथा तालिवान अधिकारी शनिबार कतारको दोहोमा भएको सम्झौतालाई शान्ति सम्झौता भन्न डराइरहेका छन् । तर अफगानिस्तानमा सतर्कताका साथ सम्झौतापछि हिंसामा कमी आउने आशा गरिए पनि आंशिक युद्धविराम मात्रै लागू हुने भन्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।